Gardarooy Godkaagii Malaguugu soo galay, Faysaloow Xafiiskii Malagugu soo galay… Faysaloow Shanta ama shabbaash?. W/Q Hodan Maxamuud Cabdi. | Berberatoday.com
Gardarooy Godkaagii Malaguugu soo galay, Faysaloow Xafiiskii Malagugu soo galay… Faysaloow Shanta ama shabbaash?. W/Q Hodan Maxamuud Cabdi.
Intaa Faysal Ucid saaranyee Dhiriq ku saydhaayo, reer Ucidoow waa Su”aal idiin taalle sidaad ka yeeshan. Sida ku cad Qaraarkii Guddida Diiwaangelinta Ururadda Siyaasadda somaliland kasoo saartay khilaafka labada garab soo kala dhex qalay,
Intaa Faysal Ucid saaranyee Dhiriq ku saydhaayo, reer Ucidoow waa Su”aal idiin taalle sidaad ka yeeshan.
Sida ku cad Qaraarkii Guddida Diiwaangelinta Ururadda Siyaasadda somaliland kasoo saartay khilaafka labada garab soo kala dhex qalay, Faysal Cali Waraabe waa Danbiile. Halka ay dacwoodayaal yihiin Musharrax Jamaal Cali Huseen iyo gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee Xisbiga Ucid Cali guray.
Sidoo kalena Go”aankay soo saareen guddidu waxa uu sheegayaa labada garab ee Ucid wax kastaa u qaybsanayaan si isle’eg. Waxanay dhinac kastaa ku amreen inuu soo xusho shan xubnood oo soo xula ergooyinka, iyadoo ergada lafteedana si siman loo qaybsanaayo.
Haddaba Faysal Cali waraabe waxa uu meel kaga dhacay go’aankii guddidu soo saartay, markaa guddida waxa laga sugaya inay u qabato muddo inuu kusoo gudbiyo xubnihiisa, sidoo kalena waxa looga fadhiyaa guddida inay muddo cayiman u qabaati racfaanka, maadaama oo xilliga la qoondeeyey yahay 45 cisho oo keliya, waxa waajib ah in racfaankana la muddeeyo.
Waxa kaloo guddida meelka dhac ku ah go”aankay soo saartay dhaqan geli waaya, mana jirto sabaab uu Faysal Cali Waraabe u fahmi waayo in ergada si siman u imaanayaan, waxkastaana yihiin laba is le’eg. Waana fulaynimo iyo kalsooni darro inuu Faysal guddida ka dalbado dad dheeraad ah oo khilaafka Xukunkiibaybsoo saartay.
Haddaba, Faysal Cali Waraabe waxa looga fadhiyaa inuu soo gudbiyo Shantii xubnood ama shabaash kalba kuu door moodo. Guddida waxa looga fadhiyaa inay meel mariso Xukunkeeddii hadiii taasi dhici waydona waa xaaraan wixii kale ee ka daba yimaadaa, iyadoo ay muuqato qorshe xaaraan ah oo ay Faysal iyo muuse ay doonayaan inay shirqoolaan Xukunkii Guddida kasoo baxay.
Hodan Maxamuud Cabdi.